Ezempilo Nezempilo Franchise - Amathuba weFranchise | Franchiseek
Ezempilo Nezempilo Franchise
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Ezempilo Nezempilo Franchise
Okubonakalisiwe Kwezempilo Nempilo Yomzimba
Izinhlobo Zempilo Nezempilo Zokugcina
Imboni yezokuqina iyakhula emhlabeni wonke ngokwanda kwamanani okukhuluphala akhula emhlabeni wonke abantu balwa nalokhu ngokuthola ubulungu bokuzivocavoca nokusebenza kuwo wonke umhlaba. Imboni yezokuzilolonga emazweni omhlaba ibone ukukhula okungaka kule minyaka embalwa edlule. Ngakho-ke namuhla sizofaka uhlu lwamaqiniso embonini yezokuzilolonga emazweni ahlukene ukuze uthole ukuzwela okukhulu ngokuthi le mboni ingakubona ukukhula okungakanani esikhathini esizayo.
Izibalo ezizungeze imboni yezempilo nokuqina.
Manje ngizofaka uhlu lwezibalo ezimbalwa ezake zaqoqwa emazweni amaningi ukukhombisa uhlobo lokukhula kanye nesidingo sebhizinisi lezempilo nokuqina ezindaweni eziningi emhlabeni jikelele. Lezi zibalo zingaphinde zikhuthaze abanye abantu ukuqhubeka nokwenza imali kulemboni ethokozisayo ekhombisa ukukhula ngokushesha kwesibalo kanye nokwenziwa kwamakhasimende minyaka yonke emhlabeni jikelele.
Umkhakha wokuqina e-US ubiza amadola angama-US $ 30 wamaRandi.
Imboni yezokuqina e-US ibone ukukhula okukhulu kwe-4% kule minyaka eyishumi edlule.
I-20% yabantu abadala baseMelika banobulungu bokuzivocavoca noma ubulungu bekilabhu yezempilo.
Ubukhulu bemakethe yomkhakha wokuqina kulo lonke elaseYurophu bufinyelele kuma- € 24 Billion euros ngo-2019.
Izwe elaseYurophu elaba nengxenye enkulu kulezo zimakethe ngo-2019 kwakuyiJalimane.
Umkhakha wokuqina eJalimane wenza imali efinyelela ku- € 5.3 billionion euro.
Ngabe bewazi ukuthi bangama-300,000 abantu e-UK abajoyina ijimu njalo ngonyaka.
Amalungu eGym akhuphuke ngezigidi ezintathu e-UK phakathi kuka-3 kuya ku-2010.
Kusukela ngo-2010 kuya ku-2020 imboni yezokuzivocavoca isikhule ngo-33%.
Imboni yezokuzivocavoca inikela e- $ 5 billion e-UK unyaka ngamunye.
Ngabe lezi zibalo zibonisa ini ngomkhakha wezempilo nokuqina?
Sekukonke lezi zibalo zikhombisa ukuthi imboni enkulu kangakanani imboni yezokuqina futhi hhayi ezweni elilodwa nje elihamba emazweni aphesheya. Futhi imboni yezempilo nokuqina ibona ukukhula njalo eminyakeni eyi-10. Okukhombisa ukuthi imboni yezempilo neyokuqina isivele inkulu kakhulu kepha isemoyeni ovulekile onamandla. Ngakho-ke uma ubungenaso isiqiniseko sokutshala imali futhi usebenza i-franchise yokuqina
Isiphetho esizungeze uMkhakha Wezempilo & Ukuqina.
Ekuphetheni imboni yezempilo nokuqina yomzimba ikhombisa ukwanda okuqhubekayo konyaka ngamunye. Okukhombisa imodeli yebhizinisi lezempilo nokuqina kuyimodeli yebhizinisi elizinzile okufanele ilandelwe. Futhi isidingo sikhuphuka njalo ngonyaka kanti abanye ochwepheshe emkhakheni wezempilo nokuqina baye baphakamisa nokuthi balindele ukuthi lezi zinombolo ziphindwe kabili eminyakeni eyi-10 ezayo. Njengoba ukufunwa kuzokhuphuka kakhulu futhi nenamba yokukhuluphala kwengane izonyuswa. Siyethemba ukuthi ufunde okuthile emhlabeni jikelele nomkhakha wokuqina womzimba ngokufunda lokhu namhlanje futhi sikufisela inhlanhla enkulu ngomsebenzi wakho wesikhathi esizayo ngaphakathi komkhakha we-franchising kithi sonke eFranchiseek.